XAQIIQADA SIIGADA: FAA’IIDADEEDA IYO FAA’IIDO DARRADEEDA W/Q: MUFAKKIR MOHAMED ABDIRIZAK SAID (SAMIIK) | shumis.net
Home » galmada » XAQIIQADA SIIGADA: FAA’IIDADEEDA IYO FAA’IIDO DARRADEEDA W/Q: MUFAKKIR MOHAMED ABDIRIZAK SAID (SAMIIK)
XAQIIQADA SIIGADA: FAA’IIDADEEDA IYO FAA’IIDO DARRADEEDA W/Q: MUFAKKIR MOHAMED ABDIRIZAK SAID (SAMIIK)
Maxaynu Uga Hadlaynaa?
Dhaawicii ku yimidey Muslimiinta kadib burburkii dowladoodii weyneyd ee Cuthmaaniyiinta, waxaa burburay wax kasta; waxey la macne tahay eeggii dowladii weyneyd ee kacaankii S. Barre AUN meesha ka baxday, waxaa lumay oo burburay dhammaan halbeegyadii, haykaladii, hababkii iyo hay’adihii. Diinta Islaam ku waxay u baahan tahay dowlad ilaalisa oo daryeesha (Islamic State) sida dhaqan ku ugu baahan yahay keyd sooyaaleed oo fan ah oo ilaaliya, kaasoo ay tahay in laga dhex arki karo hiddihii bulshada iyo dhaqan ka casriga (Fanka Iyo Suugaanta).
Natiijada laga dhaxlay burburkaas waxaa ugu waaweyn in wax kasta oo samaan ahi xumaan isku beddeleen, shay kasta tiirar kiisii rasmiga ahi kuwo samays ahi beddeleen, xeerarkii iyo haylkalkii mabaadiida ayaa beddelmay, taasina waxay aafo weyn ku noqotay ilaa iyo hadda bahda Muslimiin ta iyo Soomaalida oo wali la tacaalaya arrimahaas siday uga soo kaban lahaayeen. Guurku wuxuu ka mid yahay arrimaha sida wayn loo farfareeyey ee loo khalday; waxaa la beddelay dhammaan anshaxiisii, haykalkiisii, xeerarkiisii, duruuftiisii iyo daryeelkiisii.
Dibu-dhaca wayn ee ku yimid tirada iyo tayada Guurka, waxaa loo sababeenayaa karti darrida iyo ogaal xumida dhallinta ka haysata barashadiisa, fahamkiisa, dhaqan gelintiisa iyo dulqaad kiisa. Dhaliil aan taas ka yarayn waxaa iska leh waalidka, kuwaasoo qiima dhac iyo qaaya tir Guurka ku sameeyey, waxey qaaliyeeyeen qiimaha meherka; waxey dhallinta ka caawin waayeen fahamsiinta iyo aqoon baridda mowduucan; waxey dhallinta u fududayn waayeen guurka iyo cimiladiisa, Kol haddii qiimaha guurka uu sare u kacay, sidoo kalena dakhliga dhallinyarada uu hooseeyo, waxey natiijo ahaan sababtay in dhallintu ay siigaystaan, booskii ay ka guursan lahaayeen. 10-kii qof oo da’da 13-25 u dhaxeysa 9 kamida ayaa siigaystaa taasoo 99% ah; siigaduna waa maado dhibaatayn iyo waxyeello badan u keenta caafimaadka.
Bulshada Soomaaliyeed aminka dagaalladii qabaliga ka dib la tacaalaysa dagaallada aaminaada iyo runta, waxyaallo badan in loo cadeeyo waa daw.
Title: XAQIIQADA SIIGADA: FAA’IIDADEEDA IYO FAA’IIDO DARRADEEDA W/Q: MUFAKKIR MOHAMED ABDIRIZAK SAID (SAMIIK)
Posted by Unknown, Published at July 19, 2017 and have 0 comments